Sean Dyche Tababaraha Kooxda Burnley Ayaa Sheegay In Jonathan Moss Wax Ka Badalay Qaab Ciyaareedkiisii? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Tababaraha kooxda Burnley Sean Dyche ayaa sheegay in garsoore Jonathan Moss “uu wax ka bedelay qaab ciyaareedkiisii” ka dib markii uu erey isweydaarsaday shaqaalaha Tottenham qeybtii nasiinada markii ay kooxda Burnley barbaraha 1-1 la galeen kooxda Jose Mourinho.
Clarets ayaa 1-0 ku hogaamineysay goolka Chris Wood daqiiqadii 13aad markii, sida laga soo xigtay Dyche, xubno ka mid ah kooxdii qolka jiifka ee Mourinho ayaa la hadlay Moss, taasoo dhalisay digniin qeybtii labaad ah.
Burnley ma helin kaararka jaalaha ah kahor nus-dhamaadka laakiin shan ciyaartoy ayaa ballansaday qeybta labaad, halka Spurs ay heshay hal jaale qeybtii hore isla markaana ay ku dhameysteen ciyaarta afar.
Dyche ayaa u sheegay Sky Sports inuu dareemayo in Moss uu saameyn ku leeyahay kooxda martida ah, isagoo yiri: “Waxaa jiray ereyo mararka qaar ciyaarta ka baxayo oo ay la shaqeynayeen qaar ka mid ah shaqaalahooda iyo garsooraha, ka dibna garsooraha ayaa bedelay bandhigiisa waxaan moodayay.
Taas ayaa mararka qaar dhacda. Waxaad rajeyneysaa inaysan taasi aheyn, laakiin waxaan u maleynayay in qeybtii labaad wax walba ay u muuqdeen in wax la siiyay wax aad u yar.
“Waxaan u maleynayaa inaan heysanay lix buug. Ma arkin dhacdo kasta laakiin taasi waxay iila muuqataa wax aan caadi aheyn.”
Natiijadan ayaa ka tagtay kooxda Burnley kaalinta 10-aad iyadoo 9 kulan ay ka harsan tahay inay ciyaaraan, iyadoo laba dhibcood ka dambeysa Tottenham oo ku jirta kaalinta sideedaad.
Wiilasha Dyche ayaan guuldarro aysan gaarin shantii kulan ee ugu dambeysay Premier League, walina wey ciyaari karaan ama si ka fiican sidii ay ku dhammeystireen tan iyo markii loo dalacsiiyay – kaalinta toddobaad ee 2017-18.
Laakiin Dyche wuxuu codsaday in mas’uuliyiinta ciyaarta ay dib u eegaan dhacdooyinka garsoorayaasha ee uu u arko inay duminayaan kulamada kooxdiisa, isagoo tilmaamaya rigoore la sheegay inay dhacday ka dib markii weeraryahan Chris Wood loo taagay feerka.
“Waxaan u maleynayaa in ciyaarta ay aheyd inay taxaddar muujiso daqiiqada iyo awoodaha u baahan in laga fiirsado waxa socda,” ayuu yiri Dyche.
Ma gaari kartid go’aan sababtoo ah waxaad isku deyeysaa inaad ciyaarta u ciyarto si sax ah. Uma maleynayo inaad taas sameyn karto. Taasi waa qalad. Dhamaanteen waan ognahay taas.
“Marka waa inay eegaan arintaas, maantana waxay tusaale fiican u aheyd taas. Chris Wood, oo qalad ku galay diilinta ganaaxa – hadii taasi ay tahay meel kale oo garoonka ka jirta waa qalad – laakiin weli ma ahan, gudaha sanduuqa maanta. “
Kooxda United Boys Ayaa Sagootin u Samaysay Ciyaartoy Ka Tirsanaa Kooxda.